စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျ​ရေးအတွက်ဦးတည်ပြီး #5MillionChallenge တွင် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝ… – PVTV Myanmar
စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျ​ရေးအတွက်ဦးတည်ပြီး #5MillionChallenge တွင် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်များအတွက် ​မေတ္တာတုံ့ပြန် လက်​ဆောင်​ပေးအပ်မယ့် ကံစမ်းမဲ​ဖောက်ပွဲ
Like – 37K Share – 6312
5MillionChallengePublic Voice TelevisionPVTV MyanmarSpringRevolution
Htar Oo Yin says:
Lucky draw is not important at all as I am seeing you ❤️❤️❤️
Myat Mar says:
2021-09-05 at 7:12 PM
Lay Khin says:
2021-09-05 at 7:13 PM
Htet Yan Lin says:
Naing Min Htet says:
2021-09-05 at 7:18 PM
Ei Theingi Phyo says:
လေးစားပါတယ် အကို မင်းမော်ကွန်း ❤️
Mhyine Wai says:
Pann Nu May says:
2021-09-05 at 7:31 PM
Moemoe Lwin says:
Naing Moe says:
2021-09-05 at 7:33 PM
ငါတို႔ တေတြ နိုင္ကို နိုင္ရမည္
Ayeaye Thi says:
U Myo Win says:
2021-09-05 at 7:35 PM
I am waiting for 10 millions challenge. I want to donate one more time.
Hnin Phwe says:
2021-09-05 at 7:38 PM
Han Shein says:
စိတ်ထဲ အရမ်းခံစားရပါတယ် ။
Deep respect and thank you so much❣️
May Thazin says:
2021-09-05 at 7:43 PM
ဝါေခါင္ ျပည့္ ေက်ာ္ says:
2021-09-05 at 7:46 PM
ဒို့ ပြည်သူတွေ ညီတယ်ဟေ့…..အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်
ျငိမ္း ခ်မ္း ေအာင္ says:
2021-09-05 at 7:47 PM
စကၤာပူက မအုိင္းရစ္နဲ့လဲ ခ်ိတ္ဆက္ေစခ်င္တယ္ သူတအားကူညီေနတာ ျပည္သူေတြအတြက္
Khaing Thandar Swe says:
GEN Y က အစ်မ။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အမရေ။ ပြောသွားတာ အားရလိုက်တာ။
Khin Myo Myint says:
2021-09-05 at 8:15 PM
ကိုညီ ေလး says:
2021-09-05 at 8:22 PM
NUG သည်ငါတို့အစိုးရ PTF သည်ငါတို့တတ်မတော်
Hla Win Naing says:
2021-09-05 at 8:23 PM
PDF များအားလုံးကို လေးစားအားကိုးလျှက်ပါခင်ဗျာ၊ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Suwai Oo says:
PDF အားလုံးကျန်းမာပါစေ 🙏တစ်ယောက်ချင်းစီကိုလေးစားပါတယ် 💪💪💪
May God Bless All PDF
Win Nwe Oo says:
ဓမ္မအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော PDF ကလေးများ ၊ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ တိုက်ပွဲဝင်နေသူများအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ … ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှကင်းဝေးပါစေ … အဓမ္မတရား အမြန်ကျဆုံးပါစေ …
Tin Maung Htwe says:
2021-09-05 at 8:43 PM
Congratulations 🎉 all of you!
Moh Moh Aung says:
2021-09-05 at 8:46 PM
Congratulations 🎈 👏👏👏♥️
Katherine Kyu says:
Khin Aye Chit says:
2021-09-05 at 8:51 PM
Congratulations to all ,
2021-09-05 at 8:52 PM
ဖြူစင်နှလုံးသား ပိုင်ရှင် says:
2021-09-06 at 4:17 PM
Really appreciated for it to invite the one to one CDM campaign as they are really helping in this revolution